Nhau - Kuzvigadzirira, kutakura mutripodhi
Kuzvigadzirira, kutakura mutripodhi
S400 Kunyora sisitimu yemasirinji anoraswa
• otomatiki Kunyora & plunger gungano Yakadzikama kumhanya: 400pcs / miniti;
• Tsono chubhu inoratidzira, pusha tsvimbo kudyisa, torsion bha & kunyorera Compact chimiro ine mhando yepamusoro zvigadzirwa;
• Inogona kuve yakabatana kana kumira-yega mashandiro;
• Kupotsa mazita, kupotsa kudhinda kodhi, kubatika kwepabhagi kubvisa & otomatiki kubvisa;
• Inesarudzo spurt kodhi, purinda kodhi, laser kodhi ... online chitaridzi yekudhinda yuniti.
• Inesarudzo spurt kodhi, anodhinda kodhi, laser kodhi ... online chitaridzi yekudhinda yuniti;
• otomatiki kunyorera & plunger gungano Yakadzikama kumhanya: 200pcs / miniti.
Iyo michina inogadzirirwa otomatiki mubatanidzwa torsion bhaa, musanganiswa booster, musanganiswa chengetedzo kutenderera kana mativi ekunze zvipfeko uye kunyora kweakafarira syringe. Paunenge uchibatana ne otomatiki tsono chubhu stripper uye otomatiki pole trimmer, Inogona otomatiki kupedzisa mashandiro etsono chubhu de-nesting, pusha tsvimbo yekudyisa, mubatanidzwa booster, mubatanidzwa torsion bhaa, mubatanidzwa wekunze zvipfeko uye kunyora. Yakaringana torque kutonga inoona kuti iyo rabha plug haina kusuduruka panguva yekukwirisa, Panguva imwechete, zvionekwe kuona kana iyo tsvimbo yekusunda iri panzvimbo kana yakanyanyisa.
Yese muchina wekuona mudziyo kuti uve nechokwadi chekugadzira
1. Irabha chivhariso chekutsvagisa dhizaini inoiswa panotenderera chiteshi chechiteshi, uye mukaha pakati pepamusoro peiyo tsvimbo uye pamusoro peiyo rabha plug inogona kuiswa kune 0.2-0.5 ml chigadzirwa chakakodzera. Kana iri yakakura kana iri pasi peiyi kukosha renji, kusiyiwa kunoonekwa.
2. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi zvekugadzira zvinogona kusarudzwa kuona kwekuonekwa system, inoonekwa yekutsvagisa system inotora zvigadzirwa zveGerman Basler zvakatengwa.Automatically uone kudhinda kwemhando yeRACR mavara epamhepo, uye otomatiki aone zvisingaenderane zvinyorwa, zvisipo kurova, uye zvikanganiso .error nezvimwe zvisina kukwana zvigadzirwa zvekuvhundutsa kana kubvisa.
Pamusoro Uye Pazasi Labeler, Plaka yekuisa chisimbiso Machine, Syringe Assembly Uye Kunyora Sisitimu, Label Printer Yezvizoro Zvirongo Mabhodhoro, Yekutengesa Bhodhoro Kunyora Muchina, Label Anonyorera Mashini Emabhokisi,